Michael Jackson walaashiis oo Muslimtey laguna aroosayo magaalada Doha ee Qadar – SBC
Posted by editor on Janaayo 2, 2013 Comments
Fanaanada caanka ah Janet Jackson oo ay walaalo ahaayeen fanaankii geeriyoodey ee Michael Jackson ayaa lagu wadaa in Gu’ga soo socda ee sanadkan 2013 ay kula aqal gasho magaalada Doha ee wadanka Qadar ganacsade Wissam Al Mana oo ah nin billionaire ah oo Qadar u dhashay kaasi oo ay baacsanaysay mudo laba sano ah.
Guurka Janet Jackson & Wissam Al Mana ayaa ku soo aadayaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Fanaanada ay Janet Jackson, sida uu qorey wargeyska Us weekly, waxaa kale oo arintan xaqiijiyey qoraaga weyn ee caanka ah ee dalka Turkiga u dhashay ee lagu magacaabo Adnan Oktar oo sidoo kale loo yaqaan Harun Yahya, isagoo sheegay in Janet Jackson ay Muslimtey iyada iyo waliba Michael Jackson -kii geeriyoodey.
Xaflada arooskan waxaa ku bixi doonta 20 milyan oo doolar, iyadoo 3 milyan oo kaliya ay ku bixi doonto duulimaadka 500 qof oo ah marti sharafta arooska ka qay galaysa oo dunida dacaladeeda ka kala imaanaya.
Janet waxay kaloo xiriir saaxiibtimo mudo todobo sano ah la laheyd Jermaine Dupri oo ahaa Soo saare Mustic-ga, waxayna had iyo goor gees isaga riixdaa inay shukaansato ragga ka da’da yar iyadoo arimahaasi ka hadlaysa waxya tiri: “ Hooyadeen waxay had iyo goor inagu soo korin jirtey, dhamaanteen waxay inoo sheegi jirtey oo kaliya in aan rumaysano in da’du tahay lambar oo kaliya, waxaan idiin sheegaynaa da’deena, waayo waa halka aad u qaadaan maskax ahaan, iyo sida aad u aragto naftaada wax macno ahna ma leh”.
said bille says:
Janaayo 3, 2013 at 4:56 pm
aad baan ugu araxsanahay in gabadhaasi ay muslintey oo ilaah xaqa tusiey………..waxaan jeclahay sababteeda in kuwo badan oo kale ku muslimaan……
waxaan u mahad ceinayaa idaacada iyo joornaalisaha warkaan i soo gaarsiiyey
Janaayo 4, 2013 at 2:26 pm
Naagtu ninkay rabtaaye diin Islaam ma rabto. Isaguna waa nacas oo habar aan waxba tarayn buu daba ordayaa isagoo heli kara gabar ka yar, ka qurux badan, kuna dhalatay Islaamnimo. Waa dhegcas shaqadoodii markay lacag helaan inay naaga gaalo ah daba ordaan.
Janaayo 9, 2013 at 8:38 am
wax muslkim nimo ah meesha iigama muuqdaan yaan islaam nimda la moodin magac ee waa ku dhaqan xuduudaha alle sameeyey